အသက်(၈)နှစ်ပြည့်သွားတဲ့သားလေးနိုဝါအတွက် ဘ၀တစ်သက်စာလုံးအမှတ်ရနေစေမဲ့ ဆုံးမစကားတွနဲ့အတူမွေးနေဆေု့မွန်ကောင်းလေးတာင်းပေးလိုက်တဲ့ ဇာဏ်ခီ – Cele Snap
အသက်(၈)နှစ်ပြည့်သွားတဲ့သားလေးနိုဝါအတွက် ဘ၀တစ်သက်စာလုံးအမှတ်ရနေစေမဲ့ ဆုံးမစကားတွနဲ့အတူမွေးနေဆေု့မွန်ကောင်းလေးတာင်းပေးလိုက်တဲ့ ဇာဏ်ခီ
December 10, 2020 By Ju Ry Celebrity
တစ်နိုင်ငံလုံးက လူကြီး၊ လူငယ် ပရိသတ်မရွေး ကြိုက်နှစ်သက်အားပေးကြတဲ့ မင်းသား ဇာဏ်ခီကတော့ အသက်သုံးဆယ်ကျော်အရွယ်မှ အောင်မြင်လာခဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ “ဥပါယ်တံမျဉ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ အကြီးအကျယ်ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာဏ်ခီကတော့ ကံမကောင်းစွာနဲ့ အကယ်ဒမီဆုကြီးနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရပေမယ့် ယခု (၂၀၁၉) ခုနှစ်မှာတော့ “ထာဝရနှောင်ကြိုး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကယ်ဒမီရရှိနိုင်ဖို့ ပရီသတ်တွေက ထင်ကြေးပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင် မင်းသားတစ်ေ ယာက်ဖြစ်တဲ့ ဇာဏ်ခီကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်နေသလို တစ်ဖက်မှာလည်း မိသားစုရဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးအဖြစ် တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နေရ သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့ကတော့ ဇာဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီတို့ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသားလေး နိုဝါရဲ့ အသက် (၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာဏ်ခီကလည်း နိုဝါလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး မှတ်ထားသင့်တဲ့ ဆုံးမစကားတွေနဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းေ ပးခဲ့တာကို အခုလိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။ “Happy Birthday ပါ သားရေ!! လူတိုင်းမှာ သူ့ခရီးနဲ့သူရှိတယ် ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုတယ် ။ ဘဝကခက်ခဲ တယ်ဆိုပေမယ့် အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်နေစရာမရှိပါဘူး။”
“မင်းအတားအဆီးများစွာကို ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အချစ်နဲ့ ဂရုဏာတွေ မလျော့အောင် သေချာလုပ်ပါ ။ ဘယ်လောက်ပဲ သေးမွှားတဲ့အ ရာတွေဖြစ်ပါစေ အသိအမှတ်ပြုပါ ။ အဲဒီ အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရင် ပြည့်စုံတဲ့ ဘဝတစ်ခု မင်းရရှိလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သားမှတ်ထားရမှာက ငါက မင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး သူငယ်ချင်း ဖြစ်မှာပါ။ အဖေ သားကို နှလုံးသား တစ်ခုလုံးနဲ့ချစ်တယ် Noah. ❤️❤️❤️” ဆိုပြီး မွေးနေ့ဆုတော င်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာဏ်ခီကတော့ သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးရ င်သွေးလေးကို ဆုံးရှုံးသွားပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ် အခွင့်အရေးရရှိခဲ့တဲ့ သားလေး နိုဝါကို အသက်ထက်တောင် ပိုချစ်ရှာသူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ နိုဝါလေးလည်း မွေးနေ့ကစ ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပြီး ဖေဖေ၊ မေမေ အားကိုးထိုက်တဲ့ သားလိမ္မာလေးတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက် ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Zenn Kyi’s fb
နှစ်ဖက်သောမိဘဆွေမျိူးများနဲ့အတူ တရားသူကြီးမင်းရှေ့မှောက်မှာ မင်္ဂလာလက်မှတ်ထိုး ပွဲကျင်းပပြီး လက်ထပ်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ နိုင်းဝမ်းတို့ချစ်သူနှစ်ဦး
ချစ်သူသက်တမ်း(၅) နှစ်ပြည့်နေ့လေးမှာ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်ရတဲ့ ၀ါဆိုမိုးဦးကို ကတိစကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့အတူချစ်မြတ်နိုးကြောင်းတခမ်းတနားပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဖြိုးလေး